Antoko Aro-riaka : « Tsy tokony hosakanana ny mpaneho hevitra… » | NewsMada
Antoko Aro-riaka : « Tsy tokony hosakanana ny mpaneho hevitra… »
« Tsy tokony hosakanana ny olona maneho hevitra. Tokony handraisana fepetra kosa anefa ireo nahazoan’ny Jly Rakotomahanina Florens vaovao fa mikasa ny hanakorontana. Takianay ny hifehezan’ny Emmo/Reg ny hetsika an-dalambe », hoy ny filohan’ny antoko Aro-riaka, Rakotonirina Odon Grégoire, omaly. Notsiahiviny fa efa notakin’izy ireo tamin’ny septambra 2015 ny hanokafana ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo. Nitohy tamin’ny fangatahana teny anivon’ny kaominina hanao hetsika izany taty aoriana. « Nolavin’ny Prefet anefa izany ka voatery nanao hetsika tsy nangatahana alalana izahay… », hoy ihany izy.
Eo amin’ny fitantanana ny firenena kosa, nohitsin’ny Aro-riaka fa fotoana izao hitadiavana mpitondra hiandany amin’ny vahoaka. « Ilaina ny olona tia tanindrazana sy mahay mitondra sary mitantana. Fitiavan-tanindrazana manome vahana koa ny toekarena… », hoy Rakotonirina Odon Grégoire.
Nitondrany fanazavana koa ny fotokevi-dehiben’ity antoko tarihiny ity. Nambarany fa tsy fikambanana ny Aro-riaka. Mijoro ho antoko politika ary manana ny fahazoan-dalana avy amin’ny fanjakana, momba izany. Tsy mpiaro ny zon’ny mpanjifa koa. « Anisan’ny fotokevitra ijoroanay ny tsy fanekena ny fibodoan’ny vahiny ny tany. Na vidiana io na angatahana amin’ny fanjakana. Toherinay koa ny fandravana trano aterak’izany. Tsy ekenay koa ny fanomezana vahana sy tombony ny vahiny eo amin’ny fandraharahana raha tokony ho an’ny malagasy izany », hoy ihany izy.
Manampy ireo ny tsy fanekena ny fihanaky ny kolikoly amin’ny fivarotana tanindrazana.